वास्तुशास्त्रका अनुसार,घरको कुन दिशामा सुत्नु हुन्छ कुन दिशा सुत्नुहुँदैन? – Khabar Patrika Np
वास्तुशास्त्रका अनुसार,घरको कुन दिशामा सुत्नु हुन्छ कुन दिशा सुत्नुहुँदैन?
प्रकाशित मिति: मंगलबार, बैशाख २१, २०७८ समय: २३:४३:४१
यो पनि -महिलाका यी ७ र’हस्यहरु , जानकारीका लागि पुरा पद्नुस !=एजेन्सी, पुरुष र महिला भिन्न भएर पनि एकअर्काका परिपूरक हुन् । एकको अ’स्ति’त्वबिना अर्को सम्भव छँदै छैन । त्यसकारण महिलालाई पुरुष एवं पुरुषलाई महिलाको आवश्यकता पर्छ । कहिले काँहि पुरुषहरु महिलाको बारेमा राम्रो ज्ञान भएको ठानेर भ्रममा समेत पर्ने गर्छन् । किन कि कतिपय यस्ता कुरा हुन्छन् जुन महिलाले पुरुषलाई थाहै दिँदैनन् ।
५. तपाईंको लागि कुनै पनि सम्बन्ध निकै महत्वपूर्ण हुने गर्दछ र साथीहरुको लागि जे पनि गर्न तयार हुनुहुन्छ ।६. तपाईं पैसावाला हुनुहुन्छ तर तपाईं छिट्टै पैसा खर्च गर्नुहुन्न ।७. तपाईंलाई संगीत र खेलमा रुची हुन्छ ।८. तपाईंलाई रिस उठेपछि नराम्रो सँग उठ्छ भने गलत कुराहरुलाई सहन सक्नुहुन्न ।९. तपाईं जिद्दि हुनुहुन्छ र आफूले भनेको जस्तै हुनुपर्छ भन्ने बिचार राख्नुहुन्छ ।१०. तपाईं कसैलाई पनि ठेस पुर्याउन चाहनुहुन्न ।११. तपाईंको वैवाहिक जीवन सुखमय हुन्छ किनभने तपाईं आफ्नो पार्टनरलाई निकै केयर गर्नुहुन्छ । स्राेत दर्पण नेपाल ।